Raw Nandrolone Laurate powder (26490-31-3) hplc >98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Nandrolone ntụ ntụ Usoro / Nandrolone laurate ntụ ntụ
SKU: 26490-31-3. Categories: Nandrolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Nandrolone Laurate powder (26490-31-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Nandrolone laurate ntụ ntụ video
Raw Nandrolone laurate ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Nandrolone Laurate
Melt Point: 44-46˚C
Nchekwa Nche: 2-8ºC
Raw Nandrolone laurate uzuzu eji eme ihe na steroid
Nandrolone Laurate, na-akpọ Laurabolin, dodeacnoic (dodecanoic) ma ọ bụ laurostearic (lauric stearic) acid.
Raw Nandrolone laurate ntụ ntụ Usage
A na-ere Nandrolone laurate na ahịa anụmanụ nke mba ụfọdụ ma ọ bụ 20 ma ọ bụ 50 mg / ml. Ndị nwoke kwesịrị iji 200-400mg kwa izu, na injections dị naanị otu ugboro n'izu, ọ bụghị karịa 50 igwe kwa izu ka a na-adụ ndị inyom ọdụ.
Ịdọ aka ná ntị n'elu Nandrolone laurate ntụ ntụ
Laurabolin nwere mmetụta ndị ọzọ nke nandrolones, ọtụtụ n'ime ha dị nwayọọ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ mmekọrịta nke na-eme ma enrogens na progesterone receptors, n'ihi ya, a na-atụ aro ka ị jiri onye na-eme ihe aromatase (AI), karịsịa ma ọ bụrụ na ị kpebie ịtụkọta ya na testosterone, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emepụta aromatizating. A na-enwe mmetụta dị ka gynecomastia, mmechi mmiri, na ọbara mgbali elu.
Nandrolone laurate bụ nandrolone injectable, ọgwụ a na-enye ike mmetụta anabolic n'ụzọ dị ala, nke na-esote ya na etugo nke estrogenic na androgenic. Ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ọtụtụ ebe, nandrolone laurate bụ ndị na-eme egwuregwu na bodybuilders kwadoro maka ike ya iji kwalite ngwa ngwa na-enweta ihe na-adabere na nchịkwa na obere mmetụta dị nta.
Nandrolone Ghọtara ntụ ntụ
Raw Nandrolone laurate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Nandrolone Laura ntụ ntụ site na AASraw
AASRaw na-enye aka ọcha 98% Nandrolone laurate raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ogwu ojiji.
gosiri 2.67 si 5
Nandrolone ntụ ntụ